अनुभवका आधारमा पुडासैनी प्रकरण - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ भदौ ६ गते ७:५३
पत्रकारिताको विद्यार्थी र अध्यापक, पेपर, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रकारितामार्फत संगालेकोे अनुभव, डिप्रेसनका बारेमा हाशिल गरेको व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित रही केही विषय लेख्दै छु ।
१) भिडियो अन्तिम सत्य होइनः मृतक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको श्रब्यदृश्य बकपत्रका रुपमा सार्व्जिन भएको भिडियो अनुसन्धानका लागि बलियो आधार हो । तर यो भिडियोकै भरमा कसैलाई दोषि करार गर्न मिल्दैन । भिडियोकै बिषयमा लिएर कतिपय प्रश्न उठाइएको छ । त्यसका बारेमा अर्को बुँदामा चर्चा गर्नेछु । तर, यो बुँदामा भिडियो शालिकरामले मर्नुपूर्व स्वविवेकले बोलेका हुन् भन्ने आधारमा बिषयको चिरफार गरेको छु ।
घ) शालिकरामले भिडियोमा रबीलाई आफ्नो आत्महत्याको कारक मानेका छन् । जनतासँग सिधा कुरामा धेरै पटक यौन काण्डका बिषय छापामार शैलीमा छायाँकन भएको सर्व्विविदै छ । शालिकराम स्वंय सो कार्यक्रमको सदस्य भइसकेको र उनी स्वंयले आफ्नो विवाहइतरको सम्बन्ध बाहिरिएको भिडियोमा सार्वजनिक गरेका छन् । रबी स्वंयले शालिकरामलाई धम्की दिए वा दिएनन् ? सोधखोज र छानबिनको बिषय हो । यति प्रस्ट भन्न सकिन्छ ः शालिकरामलाई आफ्नो बिबाह इतरको सम्बन्ध जनतासँग सिधा कुरामा आउनेछ र आफ्नो जीबन मरेतुल्य हुनेछ भन्ने भयंकर भय पैदा भएको थियो । यो भय नै उनको मृत्युको कारण देखिन्छ । यो भय कसरी पैदा भयो ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । यदि शालिकरामलाई डिप्रेशनकै कारण रबीप्रति एकतर्फी संका र भय पैदा भएको भए कानूनतः रबीलाई दोषि करार गर्न मिल्दैन । तर, रबी आफू स्वंयले वा कोहीमार्फत उनलाई तर्साएको भए उनी दोषी ठहरिनेछन् । रबीलाई देखाएर शालिकरामलाई कसैले तर्सायो कि ? कपडाको मूल्य बढी लागे रबी देखाएर साहुजी तर्साउने माहोल जो छ ।
प्रहरीले शालिकरामको भिडियोलाई अन्तिम सत्यका रुपमा लिने र सोही आधारमा अदालतले रबीलाई दोषि करार गरेमा गलत नजिर स्थापित हुनेछ । आत्महत्या गर्नेले आफू मरेपछि मामाको टाउको होस कि फर्सीको गेडो भनेजस्तो जो कोहीसँग रिष साँध्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ । भिडियोमा गरिएको आरोप पुष्टि हुने केही आधार फेला परेमा रबी दोषि ठहरिन सक्छन् । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले रबीको कल डिटेल, गोप्य संवादमाथि पहुँच स्थापित गर्न सक्छ । छानबिनमा तानिएका व्यक्तिहरुबीचको म्यासेज, फोन, संवादले पनि शालिकरामलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरे नगरेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ सार्बजनिक भएको भिडियो छानबिनका लागि पहिलो आधार हो तर अन्तिम सत्य होइन ।
२) भिडियोको सत्यता बारे स् भिडियो कसरी तयार भयो ? शालिकराम स्वंयले खिचे या कसैले बाध्य पारी बक्न लगायो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । तर, भिडियोग्राफीमा केही अनुभव भएका हिसावले कतिपय प्रसंगलाई केलाउन सकिन्छ तर पुष्टि केबल अनुसन्धानबाट हुने कुरा प्रष्ट पार्दछु ।
ख) किन को प्रसंग स् नेपाल आजमा सार्वजनिक भएको भिडियोको आठ मिनेटको आसपासमा पृथकजस्तो लाग्ने स्वरमा अप्रासंगिकरुपमा किन भन्ने आवाज सुनिन्छ । यो आवाज शालिकरामको होइन तसर्थ भिडियो खिच्ने बेलामा त्यहाँ अरु कोही थियो भन्ने तर्क बलियो छ । यो तर्कको उचित जवाफ शालिकरामको मोबाइलमा रेकर्ड भएको ओरिजिनल भिडियोले दिन सक्छ । यदि सो भिडियोमा पनि सोही प्रकृतिको आवाज रहेछ भने अनुसन्धानमा किन आवाज पनि महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ । तर, नेपाल आजमा प्रकाशित भएको भिडियोको किन दृश्य सम्पादनका क्रममा अन्जानबश पनि जोडिएको हुन सक्छ । नेपाल आजले प्राप्त गर्नुपूर्व नै भिडियो सम्पादन भएकोपनि हुन सक्छ । जे भएपनि नेपाल आजमा प्रकाशित भएको भिडियो सम्पादित हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
ग) शालिकरामको आँखा यताउता दौडनु स् भिडियोमा बोल्दै गर्दा शालिकरामले यताउता पल्याकपुल्लुक हेरेको जस्तो देखिन्छ । यसरी हेर्दा उनी मोबाइलमा बोल्दै कसैलाई हेर्दै गरेका हुन्की जस्तो देखिन्छ । भिडियो खिच्दा आँखा क्यामराभन्दा बाहिर गएमा अरु कसैलाई हेरेजस्तो देखिन्छ । तपाई स्वंयले भिडियो खिच्नु भयो र क्यामराभन्दा बाहिर हेर्नु भयो भने अर्को व्यक्तिलाई हेरेजस्तो देखिन्छ । यसलाई प्राविधिक हिशाबले ‘आइ आउट अफ क्यामरा’ भनिन्छ । मृत्युबारे बक्दै गर्दा शालिकरामको पीडा कति थियो होला ? बोल्दै गर्दा कसैले सुन्छ कि भनेर उनले यताउता हेरेका थिए कि ? भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने सर्तकता उनले अपनाएका पनि हुन सक्छन् । आँखा स्वतस्फूर्त क्यामराभन्दा बाहिर गएको थियो कि ? वा त्यहाँ अरु कोही थियो ? अनुसन्धानको विषय हो तर ठोकुवा गर्न सकिने सवाल होइन ।
ङ) भेष्ट र सर्ट पाइन्टको बेमेल स् आत्महत्या सामान्यतया दुई किसिमले हुने बताइन्छ । एउटा आकास्मिक अर्को योजनाबद्ध । आफू बिरुद्धको असामान्य सन्देश सुनेमा मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि ब्लड डोनेशन गर्न गएको व्यक्तिलाई सुनाइयो कि उसलाई एचआइभी पोजेटिभ छ । उसले एकाएक सारा संसार अध्यारो देख्छ र एक्कासी निर्णय लिन सक्छ–परमधामको । अर्कोथरी आत्महत्या हुन्छ–योजनाबद्ध । भिडियोमा व्यक्त भएका कुरा र सार्वजनिक भएका शालिकरामका गोप्य संवादलाई आधार मान्दा उनले योजनाबद्धरुपमा देह त्याग गरेका हुन् । योजनाबद्ध हिशाबले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले धेरै कुराको ख्याल गरेको हुन्छ । र, सामान्यतया राम्रै पहिरन लगाएको हुन्छ । भिडियो खिच्दा भेष्ट हुनु र आत्महत्या गर्दा सर्ट प्यान्ट हुनुले खाश अर्थ राख्दैन । मर्ने कुरा शालिकरामले पहिले देखि नै गरेको च्याटबाट देखिन्छ । डिप्रेशनका बिरामीले एकै पटकको प्रयासमा आत्महत्या नगर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । पटकपटक प्रयास गरेर उनीहरु अन्तिम कर्ममा पुगेका हुन्छन् । भिडियो खिचेको समय र आत्महत्या गरेको समयको तालमेल नमिल्न पनि सक्छ ।
३) प्रहरी हिरासत र पत्रकारिताको अर्को पाटो स् लोकले मानेको छ रबी पृथक पत्रकार हुन् । बोलेरै विश्व रेकर्ड राखेका उनको प्रतिभा असाधारण छ । खान्दानीरुपमै उनको आवाज ओजनदार हो । रेडियो नेपालमा सुनिने दाजु हरिशरण लामिछानेको आवाज उस्तै दमदार तर शालिन छ । सिधासिधा विषयवस्तु राख्न सक्ने विशेष क्षमता रबीमा छ । निडर र निभर्य लाग्ने उनी आवाजबिहीनहरुको आवाजका रुपमा उदायको कुरामा पनि संका छैन । यति हुँदाहुँदै पनि रबी न पत्रकारका बिद्यार्थी थिए नत पत्रकारिता गरेको अनुभव नै उनमा थियो । त्यसैले उनमा केही यस्ता पक्ष छन् जुन पत्रकारिताको आम मान्यताका आधारमा अस्विकृत थिए । उनी बिषयवस्तु प्रस्तुत गर्छन र निष्कर्ष सुनाउँछन् । उनी यसरी बोल्छन् कि सुन्नेलाई हो झैँ बनाइदिन्छन् । झन् मिडियामार्फत बोलिएको कुराको प्रभाव बेग्लै हुन्छ । मृत्युपूर्व दिइएको भिडियो सन्देशलाई उदृत गर्दै रबीले ठोकुवा गरेका थिए–अष्टमीको हत्या भएको हो र हत्यरा सुपरभाइजर हो । उनले अनैतिक कार्य गर्न छात्रालाई होटेलसम्म पु¥याएको भनिएका शिक्षकमाथि झण्डै झण्डै हातपात गरेका थिए । आमाचकारी गाली त प्रष्टै सुनिन्थ्यो । उनले स्विकार गरेका पनि थिए त्यस्तो कुकर्म देख्दा आफूलाई थाम्नै सकेनन् । पत्रकारले थाम्नै पर्छ भन्ने मान्यताको उनले हेक्का गरेनन् ।
४) रबीप्रतिको सुभेच्छा
आरोप लगाउनुको कारण (भिडियो कसरी खिचियो), आरोपको सत्यता (शालिकराम स्वंयले रबीलाई दोषि देखेका रहेछन् भनेपनि) र रबीको संलग्नताबारे छानबिन नगरी रबी दोषी हुनेछैनन् । अकारण रबीलाई दोषी बनाउन सकिन ेछैन ।
रबी स्वंय शालिकरामलाई धम्काउन लागि परे होलान् भन्ने विश्वास लाग्दैन । बरु यो पक्राउ प्रकरण रबी र संचारकर्ममा लागेकाहरुका लागि पत्रकारितासम्बन्धी थप ज्ञान हाशिल गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । अनुसन्धानबाट निर्दोष ठहर भइ रबी थप बलियो र परिपक्व भएर फर्किने आशा छ । रबीलाई फसाउने नाममा अनेक षडयन्त्र रच्ने वा रबीलाई बचाउने नाममा अनेक तरंग ल्याउने काम नगरौँ । नेता पक्राउ परे न्यायलय घेर्ने, पुलिसको कठालो समातेर आगो झोस्ने कार्यकर्ताले समेत भनिरहेका छन्–न्यायलयलाई स्वतन्त्र रहन दिउँ, पुलिसलाई भीडले निर्दे्शित नगरौँ । सबैको चेत खुलोस्–न्याय नमरोस् अरु जे होस् ।
(नेपाल आजबाट साभार)